MILICSIGA WAXYEELLADII WASIIRKA DUULISTA HAWADA IYO GAADIIDKA CIRKA SOMALILAND! QAYBTA 1AAD | Burco Media
July 7, 2017 | Filed under: Articles-Maqaallo | Posted by: dhagacade
Wasiir Cismaan Cabdillaahi Saxardiid (Caddaani) waxa laga beddelay wasaaradda duulista hawada kaddib markii
lagu eedeeyay inay is-fahmi waayeen hawl-wadeennada wasaaraddii uu madaxda ka ahaa. Miyaad aragtay masuul loo beddelo cid ka hoosaysa awgeed? Waa wixii Boobe Yuusuf Ducaale uu liqi waayay 2012kii. Intii uu joogay waxa uu qortay saami ka mid ah shaqaalaha, sidoo kalena waxa uu isku deyay in uu la socdo dhaqaalaha ku dhaca bar-xisaabeedyada gaarka ah. Sidaas awgeed ayaa loo sameeyay isku shaandhayn degdeg ah, waxaana
Caddaani loo wanjaafay dhinaca Warfaafinta.
Waxa xilkii la wareegay Wasiir Cumar Maxamed Faarax oo hore xannaanada xoolaha u joogay.
Wasiirku waxa uu ka yaabay nin hore Wasaaradda Duulista madax uga ahaa oo haddana hadh iyo habeenba shir-doceedyo iyo kulanno kula jira adeegayaasha uu madaxda u yahay, kaas oo faro-gelin qaawan ku haya kobta uu qaranka ugu xil-saaran yahay. Wasiir Cumar waxa uu yidhi “Halkan (Wasaaradda Duulista iyo Madaarka) aniga ayaa qaranka uga masuul ah.
Ma fiicna in aan kugu dhex arko adiga oo aan shaqo dawli ah u soconnin ama aan xaalad dhoof (bixid/gelid) ku jirin”. Markii la arkay in aanu ahayn nin habraya ayaa xil-ka-beddel iyo xil-ka-qaadis loo kala dambaysiiyay, sidaas ayaana xayndaabkii Golaha Wasiirrada loo weydaariyay 14kii Ogos 2016ka ayaa Cali Maxamed Warancadde laga beddelay wasaaradda arrimaha Gudaha Somaliland,
waxaana la doonay in loo dhiibo Wasaaradda Duulista Hawada, laakiin waa uu ka cudur-daartay. “Madaxweynuhu
waa uu dhibsaday diidmadayda. Sidaas awgeed ayaan u codsaday in Safiirka Itoobiya la ii magacaabo si aan halkaas nasasho ugu qaato” ayuu Warancadde ku yidhi dad la xidhiidhay markii uu aqbalay safiirnimadii uu marka dambena ka walaacay.
Wasiir Farxaan Adan Haybe waxa uu gacanta ku hayaa xarun aan wax is-beddel lagu samaynnin tan iyo Oktoobar 2015ka oo wasaaraddaas laga beddelay ninkii dhisay nidaamka uu gacanta ku hayay. Keliya waxa uu maamulaa qaab-dhismeed la sii aloosay, lana sii agaasimay. Kaas oo ku habboon dano ay cid kale ka leedahay bardawladeedka uu muddada sannadka u dhaw gadh-wadeenka ka yahay.
Isku shaandhayn kuma samayn karo agaasime-waaxeeyada wasaaraddiisa. Waxa la odhan karaa waxa uu
hoggaamiye ugu qoran yahay shaqaale ka madax bannaan oo cid kale hoos taga. Tusaale ahaan xilliyadii aan xidhnaa, adeegayaasha wasaaraddiisu si aanay isaga u daba-fadhiisan jirain ayay dacwaddayda faraha ugula